Prefektioran’Antananarivo – Famoriana olona: « Tsy mila maka alalana ny fiangonana » | NewsMada
Nitondra fanazavana, manoloana ny resabe. Nambaran’ny eo anivon’ny prefektioran’Antananarivo, omaly, fa tsy marina ny filazana ny amin’ny tsy maintsy hakan’ny fiangonana fahazoan-dalana amin’ny fotoam-pivavahana.
« Tsy misy fiangonana maka fahazoan-dalana izany aloha, hatreto. Naka fahazoan-dalana manokana ny eo anivon’ny FJKM amin’ny alahady izao eny Antsonjombe noho izy io hetsika sy fotoam-pivavahana ankalamanjana », hoy ny prefet, ny Jly Ravelonarivo Angelo, omaly. Nanteriny fa efa nomena ny fankatoavana izany hetsika hataon’ny fiangonana izany.
Iandrasana ny ho tohin’ny fiatrehana ny Covid-19
Na izany aza anefa, nambarany fa mbola andrasana ny amin’ny mety ho toromarika miainga avy any amin’ny fanjakana ny amin’ny fiatrehana ny ho tohin’ny ady amin’ny Covid-19 izao. « Aoka anefa isika hanaja hatrany ny fepetra ara-pahasalamana rehetra ihany», hoy ny fanentanany. Notsindriny manokana fa tsy mbola mila maka fahazoan-dalana ny eo anivon’ny fiangonana hatramin’izao.
Misy fepetra arahina amin’ny hetsika anaty trano…
Eo amin’ny fampisehoana anaty efitrano kosa anefa, mazava ny nambaran’ny eo anivon’ny prefektioran’Antananarivo fa tsy maintsy ilaina alefan’ny mpikarakara hetsika any amin’izy ireo eny Tsimbazaza ny drafitry ny efitrano. Anton’izany ny ahafahana mijery ny ahafehezana ny fepetra amin’ny fiarovana ara-pahasalamana. Tafiditra ao anatin’izany ny fanajana ny elanelana sy ireo toromarika samihafa.
Tokony hahatsiaro tena ho tompon’andraikitra
Midika ireo rehetra ireo fa tsy mbola misy aloha izany ny filatsahan’ny fandrarana na koa ny fangatahana fahazoan-dalana momba ny famoriana olona, saingy tokony samy hahatsiaro tena ho tompon’andraikitra kosa anefa ny tsirairay manoloana ny fihanaky ny valanaretina.